Tun Tun's Photo Diary: May 2016
Mandalay Foods during my 2013-June Trip
2013-June မြန်မာပြည် ၁၀ရက်ပြန်တုန်းက မန္တလေးမှာ စားခဲ့တဲ့ အစားအသောက်ပုံတချို. တွေ.လို. ပို.စ်တခု ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပို.စ်မှာတော့ တခြား ပို.စ်တွေလောက် ပုံတွေ မများဘူး။ ရန်ကုန် ပို.စ်မဆက်ခင် မန္တလေးက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံ လက်ကျန်ရှင်း တဲ့ ပို.စ် ဆိုပါတော့။း)
at 5/24/2016 10:37:00 PM Links to this post4comments:
Labels: Architect, Food, Mandalay, Myanmar, Myanmar Food
Mahar Thatkyarthiha Pagoda, Mandalay (မဟာသကျသီဟ ဘုရား)
2013-Jun-27, မန္တလေး မြို.က နာမည်ကြီး ဘုရားတစ်ဆူ ဖြစ်တဲ့ (မဟာသကျသီဟ ဘုရား) Mahar Thatkyarthiha Pagoda ကို သွားဖြစ်တယ်။ ဒီဘုရားက ၃၀ x ၃၁ နဲ. ၈၅ x ၈၆ လမ်းကြား ၊ မလွန်ဘက်မှာ ရှိတာပါ။ မန္တလေး မလွန်မုန်.တီ ဆိုတာတော့ ကြားဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီဘုရား က အပြန် မလွန်မုန်.တီပါ တခါတည်း ၀င်စားခဲ့သေးတယ်။
at 5/20/2016 10:32:00 PM Links to this post No comments:
2013-Jun-26, မန္တလေး ပြန်တိုင်း ဦးပိန်တံတားကို အမြဲရောက်ဖြစ်တယ်။ အရင်တုန်းက လဲ ဦးပိန်တံတား ပို.စ်တွေ ရေးဖူးတယ်။ ဒီတခါကတော့ မှတ်မှတ်ရရ ပထမဦးဆုံး တောင်သမန် အင်းမှာ ငှက်စီးဖူးတာပါ။ ငှက်ဆိုတာက လှေကိုပြောတာပါ။ ဘာလို. ငှက်လို. ခေါ်လဲတော့ မပြောတက်ဘူး။ လှေက ငှက်နဲ. တူနေလို. ဖြစ်မယ်။
at 5/12/2016 11:08:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Amarapura, Mandalay, Myanmar, U Bein
Mahar Thatkyarthiha Pagoda, Mandalay (မဟာသကျသီဟ ဘု...